👍I-Queen Yangasese w/Igumbi Lokugeza Elihlanganyelwe e-Mountain Hostel ⛰ - I-Airbnb
👍I-Queen Yangasese w/Igumbi Lokugeza Elihlanganyelwe e-Mountain Hostel ⛰
Big Bear Lake, California, i-United States
Ikamelo e-ihostela ibungazwe ngu-Hasan
U-Hasan Ungumbungazi ovelele
Enye yamaLoji okuqala eBig Bear ebheke echibini kanye nokungena eBig Bear Village. Yakhiwa ngo-1916, ngu-Amadeo Giannini, Umsunguli weBhange LaseMelika, njengekhaya lomndeni wakhe weholide eBig Bear. Kamuva ifakwe ezithombeni ezinyakazayo eziningi zaseHollywood kanye nezakudala zaseNtshonalanga ezifana ne-"Bonanza".
I-Lodge inamakamelo angasese, amagumbi okulala kanye nezindawo zokukhempa. Kunezindawo eziningi ezijwayelekile zokuphumula kanye nezindawo ezahlukahlukene ezingemuva kwegceke okungamaqembu amakhulu ajabulisa kakhulu.
I-Lodge yethu ifana nento engekho eBig Bear Lake! Isakhiwo esiyingqayizivele sinikeza indawo yokulala enkulu enezindawo eziningi ezivamile kanye nezindawo zomlilo ezimbili ezidala indawo enhle yokubalekela entabeni. Kunamakhishi amabili ngaphakathi kwendawo alungele ukuphekela amaqembu amakhulu! Elinye yikhishi lezentengiselwano futhi lidinga Isitifiketi Somsebenzi Wokudla esingatholwa kalula yisifunda saseSan Bernardino. Elinye ikhishi yikhishi elivamile elinezinto eziyisisekelo ezifana nohhavini, i-microwave, isiqandisi, umshini wokuwasha izitsha, iwasha/umshini wokomisa izitsha okungenani abantu abayi-15.
Elinye lamagugu endawo yethu igceke elingemuva elikhulu nelihlukene elinikeza inkundla ye-volleyball, izicathulo zamahhashi, inkundla ye-yoga, isikhungo sokuzindla, inkundla yemidlalo yaseshashalazini, ibha yesiteji nezindawo zamakamu! Senze indawo ekahle ye-Wilderness Lodge ukuze iqembu lakho lizihlanganise futhi liphumule ngaphansi kwelanga noma emthunzini!
Buka ividiyo ye-Lodge yethu ku-Youtube:
Ku-YouTube, sesha, "I-Big Bear Lake - Lapho Uhlala Khona ku-Big Bear"
I-Big Bear Lake iyidolobha elimangalisayo lezintaba elinikeza izinketho ezihlukahlukene zokuzijabulisa kuzo zonke izinhlobo zabahambi!
I-Lodge yethu itholakala phezulu kweBig Bear Village ukuze ukwazi ukuhamba kalula uye ezitolo eziseduze, izindawo zokudlela, izindawo zokucima ukoma kanye nechibi!
Ukwamukela kwethu kuvulwa nsuku zonke kusukela ngo-4PM - 10PM. Sinabasebenzi abasiza izivakashi nganoma yisiphi isikhathi esidingekayo.
UHasan Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Big Bear Lake namaphethelo